Repossessed घरहरु के हुन् र कसरी ती किन्न सकिन्छ? - घर जग्गा
icloud लाई कति ठाउँ छ?
आईफोन iTunes मा पप अप गर्दैन
आईफोन अलार्म आवाज छैन
iphone बन्द र पुनःस्टार्ट रहन्छ
Foreclosed घरहरु, ती के हुन् र उनीहरु कसरी किन्न सकिन्छ?
Foreclosed घरहरु, ती के हुन् र उनीहरु कसरी किन्न सकिन्छ? मा एक सम्पत्ति किन्नुहोस् फौजदारी हुन सक्छ एक महान व्यापार , यदि तपाइँ कुनै पनि जोखिम संभाल्न सक्नुहुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको घर को निरीक्षण गरीएको छ र पत्ता लगाउनुहोस् कि क्षेत्र मा अन्य घरहरु खर्च गरीरहेछन्। यस तरीकाले, तपाइँले तपाइँलाई भन्दा धेरै तिर्नु पर्ने छैन।
एक फौजदारी एक घर हो कि repossessed र मूल मालिक एक gaveण दिए बैंक द्वारा बिक्री को लागी राखिएको छ। जब तपाइँ एक घर foreclosed को रूपमा सूचीबद्ध देख्नुहुन्छ, यसको मतलब यो हो कि यो बैंकको स्वामित्वमा छ। प्रत्येक बंधक अनुबंध तपाइँको सम्पत्ति मा एक धारणाधिकार छ। एक ग्रहणाधिकार बैंक लाई तपाइँको सम्पत्ती को नियन्त्रण लिन को लागी अनुमति दिन्छ यदि तपाइँ तपाइँको बंधक भुक्तानी गर्न बन्द गर्नुभयो ।
यहाँ foreclosures को लागी सबै भन्दा सामान्य कारणहरु मध्ये केहि छन्:
दुर्गम चिकित्सा वा क्रेडिट कार्ड debtण जसले घर मालिकलाई भुक्तानी गर्न बाट रोक्छ
एक दिवालियापन को लागी तरलता को आवश्यकता छ
जागिर गुमाउनु वा सार्नु
घर को मूल्य मा भारी गिरावट
मर्मत समस्या र मर्मत गर्न को लागी धेरै महंगा छन् र घर लाई बस्न योग्य छैन
एक foreclosed घर किन्नु एक जग्गा मालिक बाट एक मानक सम्पत्ति किन्नु भन्दा अलि फरक छ। धेरैजसो foreclosures को रूप मा बेचिन्छ, जसको मतलब छ कि तपाइँ बैंक संग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न तपाइँको लागी मर्मत गर्न को लागी।
एक repossessed घर किन्न को लाभ
त्यहाँ एक foreclosed घर किन्न को केहि फाइदाहरु छन्:
एक निर्विवाद लाभ यो हो कि उनीहरु लगभग सधैं क्षेत्र मा अन्य घरहरु भन्दा कम लागत। यो हो किनभने उनीहरु leणदाता द्वारा मूल्य निर्धारण गरीएको छ, जो केवल एक लाभ कमाउन सक्छ यदि घर बेचेको छ।
कम शीर्षक चिन्ता:
एक जग्गा मालिक बाट घर किन्नुको मतलब यो हो कि तपाइँ सफा शीर्षक पाउन सक्नुहुन्न, जुन सम्पत्तीको स्वामित्व पाउने कानूनी अधिकार हो। मालिक ब्याक कर वा घर मा liens हुन सक्छ कि उसलाई बिक्री रद्द गर्न बाध्य हुन सक्छ। जब तपाइँ एक foreclosed घर किन्नुहुन्छ, तपाइँ शीर्षक चिन्ता को बारे मा चिन्ता गर्न को लागी छैन किनकि बैंक शीर्षक सफा गर्दछ।
मानक loanण विन्यास:
तपाइँ एक अलि फरक बोली र फोरक्लोजर को लागी किनमेल गर्ने प्रक्रिया को माध्यम बाट जान को लागी हुन सक्छ, तर तपाइँ अझै पनी केहि loanण विकल्प छ। तपाइँ एक VA loanण, एक FHA loanण, वा एक USDA loanण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो किन्नको लागी, जब सम्म घर तपाइँ विचार गरीरहनुभएको अवस्थामा छ। यी सरकार द्वारा समर्थित loansण घर स्वामित्व लाई अधिक किफायती बनाउन सक्छ।
नवीकरण को लागी सम्भावित:
धेरै जसो अवस्थामा, बैंकहरु एक फौजदारी बेच्नु भन्दा पहिले मर्मत र नवीकरण गर्न इच्छुक छैनन्। जे होस्, त्यहाँ कुनै नियम छ कि भन्छन् एक बैंक तपाइँको लागी मर्मत संभाल्न सक्दैन। यदि तपाइँ एक घर मा आउनुभयो कि एक लामो समय को लागी बजार मा भएको छ, तपाइँ बैंक लाई मर्मत गर्न को लागी तपाइँ मा सार्नु भन्दा पहिले मनाउन सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
एक repossessed घर किन्न को बेफाइदा
फोरक्लोज्ड घर किन्नु मालिकको कब्जामा रहेको घर किन्नु भन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ। फोरक्लोज्ड सम्पत्ति किन्नुको केहि कमीकमजोरीहरु सामेल छन्:
बढेको रखरखाव चिन्ता:
घर मालिकहरु लाई घर को स्थिति कायम राख्न को लागी कुनै प्रोत्साहन छैन जब उनीहरुलाई थाहा छ कि उनीहरु फोरक्लोजर को लागी आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने छन्। यदि केहि टुट्छ भने, घरमालिकले पैसा खर्च गर्दैन यसलाई ठीक गर्न को लागी, र समस्या समय संगै बिग्रन सक्छ। जग्गा मालिकहरु जानबूझेर सम्पत्ति नष्ट गर्न सक्छन्। तपाइँ कुनै पनि समस्या घर लाई फिक्स गर्न को लागी जिम्मेवार हुनुहुन्छ जब तपाइँ एक foreclosed घर किन्नुहुन्छ।
जस्तै यो एक बिक्री थियो:
बैंक को मुख्य चिन्ता तपाइँको पैसा जतिसक्दो चाँडो फिर्ता पाउनु हो, जसको मतलब बिक्री को रूप मा लगभग सबै केसहरुमा छ। तपाइँ एक foreclosed घर किन्नु हुँदैन यदि तपाइँ पैसा को एक महत्वपूर्ण रकम मर्मत मा लगानी गर्न को लागी छैन।
एक बैंक ले निर्णय गर्न सक्छ कि कार्य को सबै भन्दा राम्रो कोर्स एक शेरिफ को लिलामी मा एक घर बेच्नु हो। त्यस अवस्थामा, तपाइँ प्रस्ताव को पूरा अन्तिम मूल्य तिर्न सक्नु अघि तपाइँ विलेख को नियन्त्रण लिन सक्नुहुन्छ। तपाइँ सामान्यतया लिलामी मा किनेको घर को लागी एक घर loanण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न किनकि हामीदारी र मूल्या too्कन धेरै लामो समय लाग्छ।
बस किनभने एक घर एक अचल सम्पत्ति लिस्टिंग साइट मा foreclosed को रूप मा सूचीबद्ध छ मतलब छैन कि घर बिक्री को लागी जानेछ। लगभग सबै राज्यहरु homeowners एक उद्धार अवधि जसमा उनीहरु आफ्नो बिल मा पकडेर आफ्नो घर फिर्ता प्राप्त गर्न सक्छन् प्रदान गर्दछ। केहि राज्यहरु मा, homeowners 12 महिना सम्म को लागी आफ्नो सम्पत्ती को नियन्त्रण प्राप्त गर्न सक्छन्।
वर्तमान कब्जाकर्ताको अधिकार छ:
एक घर कानूनी रूप मा repossessed गर्न सकिन्छ, तर यसको मतलब यो छैन कि कोहि सम्पत्ती मा बस्दै छैन। धेरै foreclosed घरहरु महिना वा बर्षहरु को लागी खाली बस्छन्, जो squatters लाई आकर्षित गर्न सक्छ। यदि तपाइँ एक अवैध कब्जाकर्ता संग बस्ने एक सम्पत्ति किन्नुहुन्छ, तपाइँ कानूनी रूपमा यो बेदखल गर्न को लागी आवश्यक छ, भले ही व्यक्ति वा प्रश्न मा व्यक्तिहरु को घर को अधिकार छैन। यो महिना लिन सक्छ र वकील शुल्क मा डलर को हजारौं लागत।
कसरी फौजदारी मा एक घर किन्न को लागी
के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि फौजदारी किन्नु तपाइँको लागी सही हो? यहाँ चरणहरु तपाइँ फौजदारी मा एक घर किन्न को लागी लिन सक्नुहुन्छ:
चरण १: निर्धारण गर्नुहोस् को मार्फत तपाइँ सम्पत्ति किन्नुहुनेछ।
त्यहाँ फौजदारी मा एक घर किन्न को लागी तीन तरिकाहरु छन्: मालिक बाट, बैंक बाट, वा लिलामी मा।
एक मालिक बाट खरीद
प्राविधिक रूपमा, तपाइँ एक घर मालिक जसको सम्पत्ति फौजदारी मा छ बाट एक घर किन्नुहुन्न। के सामान्यतया त्यो मामला मा हुन्छ कि छोटो बिक्री हुनेछ। एक छोटो बिक्री तब हुन्छ जब मालिक एक घर बेचेको भन्दा कम उसले धितो मा owणी छ। जब तपाइँ फौजदारी मा एक घर किन्नुहुन्छ, बैंक (मालिक होइन) तपाइँको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्छ। तपाइँ एक लामो समय अनुमोदन को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
एक बैंक मा किन्नुहोस्
तपाइँ जग्गा मालिक संग काम गर्न छोड्नु हुन्छ जब तपाइँ बैंक को माध्यम बाट एक सम्पत्ति किन्नुहुन्छ। बैंक सामान्यतया शीर्षक खाली गर्दछ र वर्तमान मालिक बेदखल गर्नु अघि तपाइँ एक foreclosed सम्पत्ति किन्नुहोस्। धेरैजसो बैंकहरु एक व्यक्ति लाई एक घर सीधै बेच्दैनन्; तपाइँ एक अनुभवी घर जग्गा एजेन्ट संग कुरा गर्न को लागी के गुणहरु उपलब्ध छन् हेर्न को लागी आवश्यक पर्दछ। यी घरहरु सामान्यतया जस्तै बेचिन्छन्। जे होस्, तपाइँ सामान्यतया घर हेर्न को लागी र बन्द गर्नु अघि एक निरीक्षण को आदेश को अवसर हुनेछ।
यदि तपाइँ बैंक वा एक विक्रेता संग कुराकानी गर्नुभयो भने तपाइँ लिलामी मा छिटो घर पाउनुहुनेछ। जे होस्, धेरै नीलामी मात्र नगद भुक्तानी स्वीकार, जसको मतलब छ कि तपाइँ पैसा को एक महत्वपूर्ण रकम को लागी खरीद को लागी तयार गर्न को लागी आवश्यक छ। लिलामीमा किनेर, तपाइँ पनि घर किन्न को लागी एक मूल्या or्कन वा निरीक्षण बिना नै सहमत हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ महान जोखिम मा हुनुहुन्छ जब तपाइँ लिलामी मा एक foreclosed घर किन्नुहुन्छ।
यो घर को फौजदारी स्थिति तपाइँ किन्न वा एक अचल सम्पत्ति एजेन्ट जो फौजदारी बिक्री मा माहिर सम्पर्क गर्न चाहानुहुन्छ को निर्धारण गर्न को लागी एक उत्कृष्ट विचार हो।
चरण २: एक अचल सम्पत्ति एजेन्ट संग काम गर्न को लागी सजिलो बनाउन को लागी।
धेरैजसो बैंकहरु एक अचल सम्पत्ति एजेन्ट (आरईओ) को लागी एक खरीदार खोज्न को लागी मानक अचल सम्पत्ति एजेन्टहरु संग काम गर्दछ को लागी foreclosed सम्पत्ति प्रदान गर्दछ।
सबै अचल सम्पत्ति एजेन्टहरु REO एजेन्टहरु संग काम गर्ने अनुभव छैन। एक अनुभवी फौजदारी एजेन्ट तपाइँ तपाइँको राज्य को आरईओ खरीद प्रक्रिया नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको मूल्य कुराकानी, एक निरीक्षण अनुरोध, र एक प्रस्ताव बनाउन। तपाइँको क्षेत्र मा अचल सम्पत्ति एजेन्टहरु को लागी खोजी गर्नुहोस् र एक एजेन्ट जो फौजदारी बिक्री मा विशेषज्ञता पाउनुहोस्।
चरण 3: तपाइँको खरीद वित्त को लागी एक धितो को लागी अनुमोदित हुनुहोस्।
जब सम्म तपाइँ एक फौजदारी नीलामी मा एक घर किन्नुहुन्छ, तपाइँ शायद तपाइँको घर खरीद को लागी वित्त को लागी एक बंधक पाउनुहुनेछ। एक पटक तपाइँ एक एजेन्ट भेट्टाउनुभयो र घरहरु को लागी खोज्न शुरू गर्नुभयो, तपाइँ चाहानुहुन्छ एक forण को लागी पूर्व स्वीकृत प्राप्त गर्नुहोस् । पूर्व अनुमोदन तपाइँलाई थाहा छ तपाइँ एक घर onण मा कति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक nderणदाता छनौट गर्नुहोस् र एक धितो पूर्व अनुमोदन अनुरोध तपाइँको खोज संकीर्ण गर्न।
चरण 4: एक मूल्या and्कन र सम्पत्ती को निरीक्षण आचरण।
निरीक्षण र मूल्या crucial्कन महत्वपूर्ण छ जब यो एक फौजदारी किन्न को लागी आउँछ। एक मूल्या the्कन leणदाता को एक आवश्यकता हो कि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कती पैसा एक सम्पत्ति लायक छ। Ndणदाताहरु घर loansण प्रस्ताव गर्नु अघि मूल्या require्कन को आवश्यकता छ किनकि उनीहरु लाई थाहा छ कि उनीहरु तपाइँलाई धेरै पैसा उधारो दिइरहेका छैनन्।
एक निरीक्षण एक घर मा एक अधिक गहिरो नजर छ। एक विशेषज्ञ घर को चारैतिर जान्छ र केहि पनी लेख्न को लागी प्रतिस्थापन वा मर्मत गर्न को लागी आवश्यक छ। किनभने foreclosures सामान्यतया मालिक द्वारा बिक्री को लागी घरहरु भन्दा बढी क्षति छ, तपाइँ एक foreclosed घर किन्नु अघि एक निरीक्षण मा जोड दिनुपर्छ।
कहिलेकाँही तपाइँ एक खरीद वा मूल्या request्कन अनुरोध गर्नु अघि तपाइँ किन्नु अघि अवसर छैन। यदि तपाइँ घर मरम्मत मा उन्नत हुनुहुन्छ तपाइँ मात्र foreclosed गुणहरु किन्न को लागी विचार गर्नु पर्छ।
चरण 5: तपाइँको नयाँ घर किन्नुहोस्
तपाइँको निरीक्षण र मूल्या of्कन को नतिजा पढ्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस् कि प्रश्न मा घर वास्तव मा तपाइँको लागी सही छ र यदि तपाइँ एक घर किन्नको साथ ठीक हुनुहुन्छ। तपाइँको धितो nderणदाता लाई तपाइँको loanण लाई अन्तिम रूप दिन को लागी सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँ पैसा वा आवश्यक नवीकरण गर्न को लागी कौशल छ। तपाइँको अचल सम्पत्ति एजेन्ट तपाइँ तपाइँको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न को लागी र तपाइँ बन्द को लागी तैयार गर्न मद्दत गर्दछ।
Foreclosures हुन्छ जब एक homeowner आफ्नो धितो मा चूक र 120ण मा 120 दिन भन्दा धेरै पछि छ।
बैंकहरु र सरकारी एजेन्सीहरु यी सम्पत्तिहरु दाबी गर्छन् र त्यसपछि उनीहरुलाई बेच्न को लागी आफ्नो वित्तीय घाटा को भरपाई गर्न को लागी।
तपाइँ लिलामी मा वा सीधा बैंक र एजेन्सीहरु बाट foreclosed सम्पत्ति किन्न सक्नुहुन्छ।
कर्पोरेट बैंक को संलग्नता को कारण यो एक फौजदारी खरिद मा कुराकानी गर्न को लागी अक्सर धेरै गाह्रो र समय खपत छ, तर तपाइँ सम्भवतः कम तिर्नुहुनेछ।
उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण कार्यालय। फोरक्लोजर कसरी काम गर्दछ? , अगस्त ५, २०२० मा पहुँच।
उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण कार्यालय। म मेरो धितो भुक्तानी गर्न सक्दिन। तपाइँ फोरक्लोजर को सामना गर्नु भन्दा पहिले यो कती समय लाग्छ? , अगस्त ५, २०२० मा पहुँच।
आवास खरीद संस्थान। कसरी फौजदारी मा एक घर किन्न को लागी । अन्तिम पहुँच: अगस्ट ५, २०२०।
छाला। एक डलर घर । अन्तिम पहुँच: अगस्ट ५, २०२०।
वेल्स फार्गो। एक फौजदारी किन्ने । अन्तिम पहुँच: अगस्ट ५, २०२०।
घरहरु किन्न को लागी Itin स्वीकार गर्ने बैंकहरु
संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक घर किन्न को लागी आवश्यकताहरु - गाइड
फ्लोरिडा मा एक घर किन्न को लागी आवश्यकताहरु
संयुक्त राज्य अमेरिका मा घर किन्नको लागी मैले कति कमाउनु पर्छ?
कसरी डाउन पेमेन्ट बिना घर किन्ने?
क्यालिफोर्निया मा एक घर किन्न को लागी आवश्यकताहरु